Waa in loo haystaa ragga timaha wanaagsan | Ragga Stylish
Ragga timaha qurxoon kaligood ma joogaan. Waxay ku haystaan ​​qalab aad iyo aad u fara badan faraha si ay u gaaraan timo heer sare ah, sida kiiska jilaaga Theo James.
Alaabooyinka cabiraya timaha ayaa ku koray noocyo kala duwan, tiro iyo wixii ka sareeya, tayo ahaan. Halkan waxaan ku tusaynaa kuwa ugu fiican ee lagu daro howlahaaga caadiga ah.
Xoojinta timaha wanaagsan waa inay ku bilaabataa dhaqid. Shaambo Aveda Invati lagu shubo dib kuma soo celin doono maalmihii aad timaha buurbuurneyd. Si kastaba ha noqotee, waxay kaa caawin doontaa inaad sida ugu fiican uga faa'iideysato waxa aad haysato.
Badeecadan kareemka ah iyo tan fudud waxay xoqdaa madaxa waxayna xoojisaa timaha wanaagsan. Sirtu waxay ku jirtaa densiplex, isku dar ah dhir (oo ay ku jiraan cowska iyo ginseng) oo ka shaqeeya inay timahaaga ka dhigaan kuwo dhumuc weyn.
Kahor hagaajinta timahaaga, mari Labbarka timaha. Ma noqon doonto ficil aan micno lahayn, maadaama ay ku dhacdo alaabooyin badan oo noocan ah. Waana taas awood u leh inuu kordhiyo mugga timahaaga ilaa boqolkiiba 10.
Xoogaa istaroog ah oo sheygan oo ay ku jirto panthenol oo ku taal timahaaga ayaa sidoo kale kaa caawin doona inaad ka dhigto mid biyaysan oo ilaaliya. Kuwani waa dhinacyo aan la iska indhatiri karin, maadaama ay sidaas sameeyaan waxay gacan ka geysan doontaa sidii muuqaalkoodu u noqon lahaa mid dhalaalaya oo aan nooleyn.
Ragga timaha wanaagsan waa inay taxadaraan markay tahay inay ku calaamadeeyaan qaabkooda timaha, jel timo iyo wax. Hagaaji, hagaaji, laakiin badankood waxay ku dhammaadaan miisaanka.
Haddii aad u baahan tahay hagaajin, hubi inuu yahay nooc cufan, sida kan oo kale ah oo ka socda guriga Kérastase. Marka lagu daro dhumucda timaha, wax cayaaro ah kama tago oo waxay bixisaa natiijo waarta.
Shay kale oo aan ka maqnaan karin hubkaaga waa shaambo qallalan. Aussie Miracle Qalalan Shampoo Aussome Volume ayaa kuu ogolaanaya inaad timahaaga ku dhaqdo biyo la'aan.
U isticmaal inta u dhexeysa maydhashada si aad u ilaaliso jirka iyo mugga timahaaga. Faa'iidooyinka kale ee qaaciddadeeda, oo ay ku jiraan soosaarida abuurka jojoba ee Australia, ayaa ah inay urka weyn leedahay oo ay tahay mid aad u fiican.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Afarta shey ee lagama maarmaanka u ah ragga timaha wanaagsan
David Beckham, oo ah Ragga Madow ee bandhigga Louis Vuitton